अनुराधा कोइराला भन्नुहुन्छ : माइती नेपाल बन्द गर्ने सपना छ ।पूरा पढ्नुहोस् ।
काठमाडौ : अनुराधा कोइराला प्रसिद्ध समाजसेवी हुन् । माइती नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाको अध्यक्षसमेत रहेकी कोइरालाले यो संस्थामार्फत करिब ४० हजार चे’लीबेटीको उ’द्धार गरिसकेकी छन् ।
विशेषतः भारतीय को’ठीहरूमा बेचि’एर नारकीय जीवन बिताउन बाध्य नेपाली चेलीबेटीहरूको उ,द्धार तथा पुनःस्थापनामा क्रि’याशील उनले यही कामका कारण सन् २०१० मा ‘सीएनएन हिरो’को सम्मान समेत पाएकी छिन् । ओखलढुङ्गा जिल्लाको रुम्जाटारमा गुरुङ परिवारमा जन्मिएकी उनले कोइराला परिवारमा प्रेम विवाह गरेकी हुन् ।
भारतबाट बीए पास गरेकी उनले २०१४ मा मदर टेरेसा सम्मानसमेत जितेकी छिन् । उनी २०७४ मा प्रदेश ३ को प्रमुखसमेत नियुक्त भएकी हुन् । आफ्नो स्वस्थ्य, परिवार र भविष्य केही नभनी नेपाली समाजलाई महिला हिंसामुक्त बनाउने अभियानमा निरन्तर लागिपरेकी अनुराधा कोइरालाको जीवनका विभिन्न पाटा ‘मेरो जीवन’ स्तम्भमा छोटकरीमा उनकै शब्दमा ।
नेपाली खाना, दाल, भात, तरकारी मलाई मनपर्ने खाना हुन् । भटमास र मकै पनि मनपर्छ । माइती नेपालमार्फत नियमित बागमती खोला सफाइ अभिनयनमा सहभागी हुँदा एक बहिनीले खोलाबाट टिपेर फालेको भुँडी मेरो हातमा अड्किएको थियो । त्यो समयदेखि माछामासु भनेपछि दिगमिग लाग्छ ।
मन नपर्ने खाना केही छैन, जे पनि खान्छु । पकाउन रुचि छ । सबैथोक पकाउन सक्छु । पहिले आमाले यसले एकै छिनमा मीठो खाना पकाउँछ भन्नुहुन्थ्यो । रेस्टुरेन्ट कहिलेकाहीँ जान्छु । रेस्टुरेन्टमा नर्मल खानेकुरा खान मनपर्छ ।
मैले फिट्नेसका लागि एक्सरसाइज गर्नुपर्दैन । किनभने म नियमित बिहान ५ बजे उठेर खाना पकाउने, सरसफाइ गर्नेदेखि घरको सबै काम गर्छु । नुहाउँछु, पूजा गर्छु र ठीक ७ बजे माइती नेपाल पुग्छु । यो मेरो नियमित रुटिन यही हो । कामले नै मेरो एक्सरसाइज भएको छ ।
स्कुले जीवनमा सर्टफ्रर्क, कलेजमा कुर्ता सुरुवाल र त्यसपछि सारी, धोती लगाइयो । १८ वर्षको उमेरदेखि आजसम्म पनि धोती र सारी लगाउने गरेकी छु । त्यो पनि सामान्य ।
पहिरनमा मनपर्ने रङ खासै यही भन्ने छैन । विशेष गरेर सेतो, निलो, हरियो मनपर्छ । धेरै पहिरन किन्ने, ब्रान्ड हेर्ने बानी छैन ।
पहिले पुस्तक धेरै पढ्थेँ । अहिले पुस्तक अध्ययनमा कमी भएको छ । जबदेखि माइती नेपालको काम सुरु गरेँ त्यो समयदेखि पुस्तक अध्ययन गर्न भ्याइनँ । पत्रपत्रिका धेरै पढ्छु, रुचि भएका किताबसमेत पढ्ने गरेको छु । पढ्नेभन्दा पनि मेरो महिला बालबालिकाको सेवामा काम गर्ने शोख छ । पहिले पहिले त सबै खालका किताब पढ्थेँ ।
फुर्सद फिटिक्कै छैन । कहिलेकाहीँ फुर्सद निकालेर खुट्टा तानेर सुत्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । हरेक दिन म सुत्दा बेलुकाको ११ बजेको हुन्छ । गफ गर्ने, कसैसँग बस्ने फुर्सदसमेत छैन ।
घुमफिरमा रुचि छ । फ्री भएर भन्दा पनि कामले घुम्ने गरेको छु । कामको सिलसिलामा देशको डाँडाकाँडा, तराई सबै खालका भू–भाग पुग्दा एकदमै मनपर्छ । देशको सुदूरपश्चिमको बाजुरा, बझाङ, डोल्पा, रोल्पाबाहेक प्रायः जिल्ला पुगेको छु ।
विदेशका पनि धेरै ठाउँ पुगेको छु । धेरैले अनुराधा दिदीले संसार घुम्यो भन्छन् । तर कामको सिलसिलामा बिदेश जाँदा बिहान मिटिङ हुन्छ, एक पटक टी–टाइम, अर्काे लन्च टाइम र डिनर ब्रेक हुन्छ । अन्य समय मिटिङ हुन्छ । त्यही क्रममा राति कार्यक्रम सकिन्छ । साँझ परेपछि होटलमा गयो, सुत्यो । विदेशका देश टेक्ने र भिसा पाउने काम मात्र भयो ।
म नपुगेको देश थोरै होला । सारै जान मनपर्ने देश इजिप्ट हो ।
खेलकुदमा रुचि छ, किन नहुनु नि । स्कुल पढ्दा म हक्की खेलाडी थिए । मेरो खुट्टामा अहिले हेर्नुभयो भने हक्कीले लागेको डामैडाम देख्न सक्नुहुन्छ । त्यो समय मेरो टिमले हक्कीबाट विभिन्न पुरस्कारसमेत हात पर्दथ्याे । अहिले पनि खेलकुदमा रुचि छ । त्यसैले म माइती नेपालका बच्चाहरुलाई तेक्वान्दोदेखि भलिबल, बास्केटबल, फुटबल लगायत सबै खेल खेल्नुपर्छ भनेर सिकाउने, खेल्न लगाउने गर्छु । सबै खेल हेर्न पनि मनपर्छ ।
अहिले मसँग दुईवटा मोबाइल छ । एउटा अफिसका लागि र अर्काे पर्सनलका लागि हो । ब्रान्ड के हो, त्यो जान्दिनँ ।
मोबाइल उठाउन र फोन गर्न आउँछ । अन्य फङ्सन चलाउन जाँन्दिनँ । चलाउन पर्यो भने नाति, अफिसको सहयोगी विश्वलाई भन्नुपर्छ ।​
टिभी हेर्छु । टिभीमा नियमित हेर्ने भनेको १० बजेको समाचार हो । भारतीय टिभी च्यानलको गायन रियालटी सो इन्डियन आइडल र सारेगमप हेर्छु । त्यसमा कहिलेकाँही नेपालीले पनि सहभागी जनाए भएकाले हेर्ने गरेको हो ।
फिल्म नहेरेको जुगौँ भो । फिल्म हलमा तीन घन्टा बस्न सक्दिनँ म । किनभने मेरो काम धेरै छ । पहिले पहिले हिन्दी, नेपाली सबै प्रकारका फिल्म हेर्थें । माइतीघर, आमा लगायत पहिले हेरेको फिल्म अहिले पनि सम्झना छ ।
त्यस्तै २०२६, ०२७ सालमा दिनेशप्रसाद कोइरालासँग मैले प्रेम विवाह गरेको हो । म गुरुङको छोरी हुँ । प्रेम विवाह कोइरालाको छोरासँग भयो । म बानेश्वरको एक स्कुलमा पढाउँथे । उहाँको घर त्यही नजिक थियो । स्कुल जाने, फर्कने क्रममा उहाँसँग देखभेट भैरहन्थ्यो । सोही क्रममा उहाँसँग प्रेम बस्यो । प्रेम बसेको ३ वर्षपछि हामीले विवाह गर्यौँ । सो समय प्रेम विवाह गर्नु निकै कठिन थियो ।
म गुरुङको छोरी, मेरो श्रीमान्को घर जातजाति, धर्म मान्ने कट्टर कोइराला परिवार थियो । त्यो घरका एड्जस्ट हुन निकै गाह्रो भयो । त्यो समय विवाहपछिको सङ्घर्ष कति छन् कति । त्यो कुरा अहिले नगराैं। त्यो सकिएको दुःख किन खोतल्ने ।
मेरो मुख्य पेसा शिक्षक हो । मैले २६ वर्ष शिक्षण पेसा गरे । पहिले सुरुमा डिल्लीबजारमा रहेको न्यू अङ्ग्रेजी बोडिङ स्कुलमा पढाउँथे । त्यो पछि बानेश्वरमा सरेर अमर आदर्श बन्यो । त्यसपछि मार्टियसमा पढाएँ । मैले आफैले डिल्लीबजारमा स्कुल समेत खोलेको थिए । त्यो स्कुलको नाम त्रिशक्ति थियो । त्रिशक्ति नाम राख्नुको कारण मेरो देवी दुर्गा प्रतिको आस्था पनि हो । अहिले पनि त्यो स्कुल चलिरहेको छ ।
म भने माइती नेपालमा छु । माइती नेपालमा पनि शिक्षकजस्तै भूमिका छ । यसबाट धेरैलाई बाटो देखाउने, सिकाउने काम गर्दैछु ।
एक किसिमले भन्ने हो भने अध्यापन पनि समाजसेवा हो । ‘माइती नेपाल’ मैले नै स्थापना गरेको संस्था हो । मेरो पारिवारिक जीवनमा एक समय खलल आएको थियो । सो समय म छोराहरु लिएर एक्लै बस्थेँ । शिक्षक भए पनि बैरागी जस्तै भएको थिए । पशुपति नियमित जान्थेँ । त्यही क्रममा पशुपतिमा महिलाका दुःख, बेचबिखन देख्थेँ । मनमा छुन्थ्यो ।
यो कुराको म सानैदेखि पनि विरोध गर्दै आएको थिएँ । पशुपतिमा माग्ने बच्चाहरु देख्थेँ । उनीहरुका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर सोच्थेँ । स्कुलको मास्टरी कामले धेरै पैसा आउँदैन थियो ।
त्यसैले आफ्नो गरगहना सबै बेचेर त्यहाँ बस्ने महिलाको माग्नु हँुदैन भनेर १० वटा नाङ्लो किनेर ८ जनालाई पसलमा चाहिने सामानसमेत मिलाएर काममा लगाएँ ।
त्यही क्रममा उनीहरुको छोराछोरी राख्न तीन हजारमा घर भाडा लिएर उनीहरुलाई राख्न थाले । ४ कोठा भएको घरमा एउटामा म र मेरो छोरा सुत्थ्यौँ भने अन्यमा उनीहरु राख्थे ।
काम गर्दै जाँदा भरत भुर्तेल, तारानाथ दाहाल, म लगायतले उनीहरुको पालनपोषणका लागि समाजसेवी संस्था खोल्ने निर्णय गर्यौँ । नाम के राख्ने भनेर सोच्दा ‘माइती’ भनेर राखियो । त्यसरी सुरु भएको माइती नेपाल पछि सबैले छोड्नुभयो । अरू नयाँ समिति बनाएर संरक्षकमा म रहेर काम गर्दै आएकी छु ।
अहिलेको मेरो सपना माइती नेपाल बन्द गर्नेछ । मैले योभन्दा सबैले यो पागल भइछ भन्छन् होला । यो मुलुकका बालबालिका तथा महिलाहरुलाई कुनै पनि दुव्र्यवहार नहोस्, उनीहरुको कुनै प्रकारको बेचबिखन नहोस्, कसैको पनि यौन हिंसा नहोस् भन्ने मेरो सपना छ । देशमा यस्तो क्रियाकलाप भएन भने माइती नेपाल किन चाहियो ? त्यसैले मैले माइती नेपाल बन्द गर्ने सपना छ भनेकी हुँ । मेरो एक मात्र सपना यही हो । चेलीबेटी बेच,बिखन मुक्त देश बनाउन चाहन्छु म । यस्तो देश भयो भने माइती नेपालको के काम ? मैले माइती नेपालमार्फत ४० हजार चेलीबेटीहरूको उ,द्धार गरिसकेकी छु ।
गीतसङ्गीत मनपर्छ, धेरै सुन्छु । जे मनमा लाग्छ त्यही सुन्छ । नेपाली हिन्दी सबै प्रकारका गीतसङ्गीत, भजन सुन्छु ।
मापसे छुँदै छुन्न । मेरो बाबु, बाजे कसैले पनि मापसे गरेनन् । म गुरुङको छोरी हो । गुरुङले खान्छ नै भन्ने मान्यता समाजमा रहेको पाइन्छ । मेरो बाजे साधु हुनुहुन्थ्यो । फुपूहरू प्रणामी थिए । मेरो बुबा कर्नेल हुनुहुन्थ्यो । मेरो घरमा कसैले पनि मापसे गर्दैन थिए । अहिले पनि मेरो घरमा चल्दैन ।
म मापसे गर्ने पैसा मलाई दिए हुन्थ्यो भन्छु । त्यसको मतलब एउटा बच्चा पढाइदिए हुन्थ्यो भनेको हो, अन्य भन्न खोजेकी होइन ।
मानिस हुँ, जानी नजानी भूल भए होलान् । जब मेलै विवाह गरे । मेरो बाबाले अङ्ग्रेजीमा एक लाइन लेख्नुभएको थियो ‘आई टुक यू एज माई सन् टुडे यू ह्यब बिट्रेड मी’ (मैले तिमीलाई आफ्नो छोरा माने तर तिमीले आज मलाई धोका दियौ) । उहाँले मलाई छोराजस्तो गर्नुहुन्थ्यो । तर मैलै धोका दिएँ । परिवारको सहमतिबिना विवाह गर्नु मेरो जीवनको ठूलो भूल थियो ।
रोग त धेरै छ मलाई । डाक्टरहरुले रेस्ट गर्नुस् भनेर भनेका छन् । म भ्याउदिनँ । डा’इबेटिज, प्रेसर लगायतका रोग भने भगवानको कृपाले अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
मेरो राशि ‘मकर’ हो । ग्रहदशामा विश्वास गर्दिनँ । हेराउने जुराउने पनि गर्दिनँ । कसैले हेरेर चेलीबेटी बेचबिखन यो समय अन्त्य हुन्छ भनेर भनिदिए, त्यो मिल्यो भने म त्यसको पूजा गर्थें ।
मृत्यु स्वाभाविक हो । जन्मेपछि एक दिन मर्नैपर्छ । मरेर केही लाने होइन । मृ’त्यु सत्य हो । सुखद मृ’त्यु होस्, सेवा गर्दागर्दै मर्न पाइयोस् भन्ने छ ।
२०७७ फाल्गुन २२, शनिबार १५:१३ गते 1 Minute 810 Views